Klopp oo si maldahan u sheegay in lagu sii dhawaanayo bixitaanka xiddig ka tirsan kooxda Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 02 Okt 2020.Tababaraha Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa si maldahan u sheegay in xiddiga kooxdiisa uu ku sii dhawaanayo inuu ka tago garoonka Anfield,
Jürgen Klopp ayaa sheegay in laacibka reer Switzerland ee Xherdan Shaqiri uu ku dhow yahay inuu ku biiro koox cusub kahor inta uusan dhamaan suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Xherdan Shaqiri ayaa seegay kulankii xalay ay iska xaadirisay wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Carabao Cup kaddib markii ay kaga soo gudubtay kooxda Liverpool rigoorayaal 4-5 ah, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada wareega 16-ka ee tartankan.
Jürgen Klopp oo wax laga weydiiyay sababta uu ugu reebay Xherdan Shaqiri kulanka Arsenal ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Ma awoodo mana doonayo inaan wax ka sheego”.
“Laakiin waxa aan dhihi karo waa inuusan dhaawac qabin, ka reebitaankiisa shaxdana aysan aheyn mid isagu lagu ciqaabayo”.
Waxaa xusid mudan in Xherdan Shaqiri uu horay ugu soo ciyaaray kooxaha Basel, Bayern Munich, Inter Milan iyo Stoke City, ka hor inta uusan u dhaqaaqin 2018 Liverpool oo loo diiwaan galiyay inuu kula guuleystay tartanka Champions League, horyaalka Premier League iyo Club World Cup.